ရန်ကုန်မြို့တွင် အမှို က်ပုံရန် နေရာ ရှာရပိုခက် လာဟု မြို့တော် ၀န်ဆို - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့တွင် အမှို က်ပုံရန် နေရာ ရှာရပိုခက် လာဟု မြို့တော် ၀န်ဆို
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၃၀-ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် လူနေထိုင်ရန်နေရာထက် အမှိုက်ပုံရန်နေရာ ရှာရပိုခက်လာ ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင် မောင်စိုးက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဒလမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွေးတင်က ဒလမြို့နယ်ရှိ နောက်ဆုံးစွန့် ပစ်အမှိုက်ပုံကို နေရာရွှေ့ပြောင်းရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိနှင့် ခေတ်မီအမှိုက်မီးရှို့ စက်ဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိမေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန်က အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်က “”အမှိုက် ပုံကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ မြို့အစွန်ဆုံး နေရာကို သတ်မှတ်ရတယ်။ သို့သော်လည်း အမှိုက်ပုံက လူရှိရာကို ရွှေ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ အမှိုက်ပုံရှိရာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် လူတွေကရွှေ့လာတဲ့အတွက် အမှိုက်ပုံနေရာကို ထပ်ထပ် ရွှေ့ရတယ်။ သင့်တော်တဲ့မြေနေရာ လူနေရပ်ကွက်နဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမျိုးမှာ ရှာရလို့လူနေ ထိုင်ရာနေရာထက် အမှိုက် ပုံနေရာရှာရတာ ပိုခက်လာပါတယ်””ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒလမြို့ နယ်မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၄)၊ ကျန် စစ်သားလမ်းရှိ မြေကွက်အမှတ် ၃၃၈၄၊ မြေဧက၂ ဒသမ ၇၄၉ ဧကသည် ရန် ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ပိုင် မြေကွက်ဖြစ် ပြီး ယင်းမြေကွက်နေရာကို ဒလတစ် မြို့နယ်လုံး၏ နေ့စဉ် အမှိုက်တန်ချိန် ၂၄ တန်အားစွန့်ပစ်သည့် နောက်ဆုံး အမှိုက်ပုံအဖြစ် ရန်ကုန်စည်ပင်၊ ပတ် ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းမှု ဌာနမှ ၁၉၉၆- ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
လက်ရှိတွင် ယင်းအမှိုက်ပုံမှအနံ့ ဆိုးများကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု များဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် အနီးဝန်းကျင်နေ ပြည်သူများက အမှိုက်ပုံနေရာပြောင်း ရွှေ့ပေးစေလိုသည်ဟု ဒလမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ တင် ပြခဲ့ကြောင်း၊ ဒလတံတားတည်ဆောက် ပြီးပါက နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များလည်း မြင်တွေ့လာနိုင်ခြင်းကြောင့် ယင်းအမှိုက် ပုံသည် မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့် ညီညွတ် ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ကြယ် ပွင့်ပြမေးခွန်းအဖြစ် မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဒလမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင် ထွေးက ပြောသည်။
ယင်းအမှိုက်ပုံနေရာကို ပြောင်းရွှေ့ ရန်သင့်တော်သည့် နေရာရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒလတံတားတည်ဆောက် ပြီးစီးပါက ရန်ကုန်ဘက်ခြမ်းမှအမှိုက် များနှင့် ဒလဘက်မှအမှိုက်တို့ကို စု ပေါင်းပြီး ခေတ်မီနည်းပညာဖြင့် အမှိုက် မီးရှို့စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် အစီအ စဉ်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်က ဖြေကြားခဲ့သည်။
စတေကာ၊ လေစုပ် ခွက်၊ ကြော်ငြာနှင့် လိုက် ကာများ တပ်ဆင်ထား သည့် တက္ကစီယာဉ် များကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော တွင် ပြည်သူ့စစ်ဌာ နေ၃၄ ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ထားပြီး သုံးဖွဲ့ကို လက်နက် တပ်ဆင??
ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲ အာဘေး အပြတ်အသတ် အနိုင်ရ၊ မြောက်ကိုရီးယား အရေး စေ့စပ်မည်
”အခုနောက်ပိုင်းမှာ လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေ ဝင်လာတယ်၊ ထုတ်လုပ်မှု ဒီဇိုင်းတွေ ပုံစံတွေ ပြောင်းလာပ?
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အတွက် လှိုင်သာယာစက်မှု စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်း?
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍကိုမြှင့်တင်ရန် မြန်မာကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်ရေးစင်တာကို ယခုနှစ်အတွင?